Bulchaa Sidaamaa: Bu’aan rifarandamichaa kan fedhe yoo ta’e jiruuf jireenyi uummattootaa itti fufa' - BBC News Afaan Oromoo
Bulchaa Sidaamaa: Bu’aan rifarandamichaa kan fedhe yoo ta’e jiruuf jireenyi uummattootaa itti fufa'
'Guyya kanarra kan geenye qabsoo guddaadhaani'
Xumuramuu qophii rifarandamii ilaalchisuun miidiyaalef ibsa kan laatan bulchaan godina Sidaamaa Obbo Dastaa Ledaamo rakkoon nageenyaa kanaan dura godinicha keessatti mul'ate akka irra hin deebinef akka hojjetan himan.
Sidaamaan naannoo yoo ta'es uummatni biraan godinicha keessa jiru nagahaan akka jiraatu gochuun dirqama ta'uus dubbatan.
Gama biraatin qophii rifarandamichaaf taasifamaa ture ilaalchisee iddoowwan filannoon itti adeemsifamu adda baasuu fi mijeessurraa eegalee qophiiwwan garaagaraa gochaa turuu isaanii himan.
'Bu'aa rifarandamii Sadaasa 11 ni ifoomsina'
Dhimma nageenyaa irrattis uummata walin mariiwwan taasisaa turuu isaanii kan himan bulchaan godina Sidaamaa Obbo Dastaa Ledaamo "wantootni nagaa filannicha jeeqan akka hin uummamnef qophii taasisneerra," jedhan.
Raayyaan Ittisa Biyyaa, poolisiin federaalaa, humni addaa naannichaa, poolisiin naannichaa fi qaamoleen nageenyaa godinaa fi magaalaa, nageenya waliin hojjechaa jiraachuu kan dubbatan Obbo Dastaan, hanga ammaattis dhimmi rakkoo nageenyaa ta'e akka hin mudanne himan.
Rifarandamicharratti sagalee kennuf uummatni miiliyoona 2.3 ol galmaa'uusaa yaadachiisuun, iddoowwan tokko tokkotti namni hanga karoorfamee ol galmaa'uusaas himaniiru.
"Iddoowwan tokko tokkotti baay'inna namaarraa kan ka'e yeroon filannoo sa'aa 12 boodallee turuu danda'a," jedhan.
Kun garuu iddoo qaamni itti gaafatamummaa fudhatu jirutti ta'a jedhan.
"Bu'aa rifarandamichaa ilaalchisee wanti nuti dursinee tilmaamnu ni jira," kan jedhan bulchaan godina Sidaamaa Obbo Dastaan haalli gammachuun itti ibsamu hooggansi, jaarsoliin fi hayyuulen Sidaamaa irratti mari'atanii yoo murteessan gaarii akka ta'u dubbatan.
Guyyaa rifarandamii fi guyyaa Kamisaa magaalaa Hawaasaa keessatti doqdoqqeen akka hin sochoone dhorkamuus bulchaan godinichaa himaniiru.
Geejibni idilee magaalaa Hawaasaa keessas ta'e geejibni iddoowwan biraatii gara godinichaatti fi godinichaa gara iddoowwan birootti taasifaman irratti qoqqobbin akka hin taasifamne dubbatan.
Dhaabbileen barnootaa fi hojiis rifarandamichaaf haala mijataa uumuf ni cufamu. Dhaabbileen fayyaa fi manneen nyaataa garuu haaluma kana dura tureen hojii isaanii hojjechuu danda'u jedhan.
Komii qaamoleen nageenyaa buufataalee filannootti raawwachiistota waliin mul'ataa jiru jedhuf yeroo deebisan "qaamoleen kunneen nageenya eegsisuuf argaman, haa ta'u malee raawwachiistotni filannoo barbaachisummaa qaamolee nageenyaa irratti hundaa'uun murtee kennuu danda'u," jedhan.
Adeemsa galmee ilaalchisee dhiibbaan namoota irratti godhame hin jiru kan jedhan bulchaan godina Sidaamaa Obbo Dastaa Ledaamoo, komii mallattoon mana citaa (Sidaamaan naannoo Kibbaa keessa yaa turu jedhu) magaalicha keessa hin mul'atu jedhuf "kun dhimma baay'ina deeggartootaa irraa kan ka'edha" jechuun himan.
Kana malees namni sodaa malee haala dimokiraatawaa ta'een akka filatu abdii qabanis kan himan bulchaan kun, "firiin filannoo erga ifoomsamee boodas namni gammachuus ta'e gadda isaa ibsachuf mirgasaatti fayyadamuu ni danda'a," jedhan.
Viidiyoo Rifarandamii Sidaamaa: 'Guyyaa kanarra kan geenye qabsoo guddaadhaani'
Rifarandamii Sidaamaa: Bu'aa rifarandamii Sadaasa 11 ni ifoomsina jedhe Boordiin Filannoo Biyyaalessaa
18 Sadaasa 2019
Boordii Filannoo: 'Filannoon yerooma qabameefiitti gaggeeffama'
27 Caamsa 2019
Yunvarsiitii Waldiyaatti lubbuun barataa tokkoo darbe
Dhibeen Gifiraa addunyaarratti dabalaa jira